people Nepal » निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरणमा सरकारकै भूमिका संदिग्ध : नयाँ शक्ति निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरणमा सरकारकै भूमिका संदिग्ध : नयाँ शक्ति – people Nepal
निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरणमा सरकारकै भूमिका संदिग्ध : नयाँ शक्ति
नयाँ शक्ति पार्टीले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारको भूमिका संदिग्ध र आपत्तिजनक भएको आरोप लगाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पन्त प्रकरण पञ्चायतकालमा सेतीको खोँचमा फेला परेका नमीता–सुनीताजस्तै रहस्यमयी भएको र सरकार अनेक तरहले ढाकछोप गर्न लागेको बताए ।
नेकपा सरकार गठन भएयता १५ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको भन्दै सरकार क्रमशः असफलतातर्फ उन्मुख भएको नयाँ शक्तिको ठहर छ ।
नेकपा र फोरमसँग एकता असम्भव
एक अर्को सन्दर्भमा डा. भट्टराईले ने क पा र नयाँ शक्ति उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवजस्तो भएकाले एकताको कुनै सम्भावना नरहेको र ने क पामात्र नभर्इ कुनै पनि पुराना शक्तिसँग एकताको सम्भावना सकिएको बताएका छन् ।
“वर्तमान सत्ता सञ्चालकको व्यवहार र कार्यशैलीले पनि त्यो कुराको पुष्टि गरेको छ । पुराना शक्तिबाट मुलुकको विकास अब सम्भव रहेन,” उनको निष्कर्ष थियो ।
त्यस्तै उनले बूढीगण्डकी परियोजना कमिसन र भूराजनीतिक रणनीतिको गोटी बनाइएको आरोप लगाउँदै विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उक्त निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन मागसमेत उनले गरे ।
त्यस्तै नेपाली सेनाभित्र व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने तथ्य बाहिर आएको भन्दै राज्यले सेनालाई दिएका ठूला परियोजना कमिसनको गोलचक्करमा फसेको तथ्य पार्टीलाई प्राप्त भएको उनले बताए ।
कात्तिक १४ र १५ गते बसेको नयाँ शक्तिको बैठकले सरकारको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।
आजैमात्र निर्मला पन्त हत्याको सय दिन पूरा भएको र सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजना गरिएको र निरन्तर सरकारको असक्षमताको भण्डाफोर गरिने नयाँ शक्तिले जनाएको छ ।
मंसिरदेखि चैतसम्म ‘पाँच महिना पाँच काम र पाँच परिणाम’को कार्ययोजना तयार गरिएको नयाँ शक्तिले बताएको छ । यसैबीच माघ १५ देखि फागुन १५ सम्म पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म १७६५ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गमा ‘जनजागरण यात्रा’ गरिने पार्टीले जनाएको छ ।
जनजागरण यात्रामा निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध भएको नयाँ शक्तिले बताएको छ ।